Calaamada Aadan - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Aadan iyo xaaskiisa Xawa waxay ahayeen dad caajiba waayo si toos ah uyuu vIlaahay u abuuray iyaha kuna noolaayeen Janno Firdoosa. ‘ Aadan ‘ micnaheedu waa ‘ wasakh ‘ ee afka asalka Cibraaniga , taasi oo tilmaamaysa in laga abuuray dhoobada dhulka , ama ciidda . Aadan iyo Xaawo ayaa dhamaan aadanahu ayaa ka soo jeedan . Maxaa yeelay, iyagu waa ‘ madax ‘ ee cirqiga aadanaha ay leeyihiin calaamad muhiim ah in aannu si ay u bartano . Waxaan eegay laba aayadaha isku midka ah ee Quraanka oo ka hadlaya Aadan , iyo mid ka mid ah kitaabka Bilowgii oo ku dhex yaal Tawreed Muuse ( Musa ) . ( Riix Halkan si aad u furato aayadahani waxay oo bog kale ku qoran) .
“ oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta, iyo farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibtiisaad burburin doontaa.”
Tags:Aadan islamAadan iyo Quraanka ka horAadan iyo Xaawo ee QuraankaAadan Quraanka ka horAdam NebiAdam nebi ka islamAdam nebi ka jannoAdam nebigaAdam nebiga beertaAdam nebiga islamAdam nebiga iyo IbliisAdam nebiga iyo shaytanal Kitab ku saabsan Aadananti-Masiix in tawreedbeer Aadanbuug Aadancalaamad ah AadanIbliiska hor Quraankanabi Aadan iyo XaawoQuraanka on Adamshaytanstory of Xaawa iyo Aadantaariikhda Aadan nebigaTawreed oo ku saabsan Adamwaxa aan wax Tawreed yidhaahdo oo ku saabsan Adamwaxa aanu Kitab al yidhaahdo oo ku saabsan Adamwaxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Aadan iyo Xaawowaxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Adam
1 thought on “Calaamada Aadan”
yassin 02/01/2017 at 6:34 pm
waa Aqoon loo baahnaa dadka somaalida aqoontooda ayay sare u qadaysaa.
waa wax wanaagsan in ay dadka somaalidu injiil iyo sabuur iyo tawreed ku baran karaan af somali aad u sareeya. waxaan aad ugu mahad naqayaa dadkaa ka soo shaqeeyey aqoontan ka maqnayd somalida. imika waxaan si fican uga bogan karaa injiil iyo subuur iyo tawreed in badan baa la igu sheegay si xun imika waan waan fahmay.